Ra.iisul wasaaraha Kenya Rayla Odinga Ciidankeena ayaa weeraray Kismaayo
Nairobi:-Ra.iisul wasaaraha dowladda Kenya Rayla Odinga ayaa markii ugu horaysay waxaa uu saxaafada dalka Kenya iyo wakaaladaha wararka ee caalamiga uu u sheegay in weerarkii gardarada ahaa ee shalay lagu qaaday magaalada Kismaayo ay fuliyeen diyaarado laga leeyahay dalka Kenya.
Ra.iisul wasaaraha dowladda Kenya Rayla Odinga ayaa ku dooday in weerarka cirka ahaa ee ay qaadeen ciidanka cirka ee dalka Kenya ay la beegsadeen saldhiyo ay ku sugnaayeen ciidanka Al-shabaab oo ku yaal magaalada Kismaayo khasaarana ay u geysteen, Masuul Sare oo u hadlay maamulka magaalada Kismaayo ee ururka Al-shabaab ayaa beeniyey in wax saldhigyo ah ama baro ciidan ah ay weerareen diyaaradaha dalka Kenya waxaan uu sheegay in goob u jirta 1 Km dekkada Kismaayo ay Bam fulaynimo ah ku tuureen wax khasaaro ahna uusan geysan.
Ra.iisul wasaaraha dowladda Kenya Rayla Odinga ayaa sheegay in weerarkii gardarada ahaa ee ay ciidanka Kenya ay ku qaadeen gudaha Soomaaliya gaar haan Kismaayo ay gacan ka siiyeen ciidamo reer Galbeed ah oo uusan xusin , Ra’iisul wasaaraha dowladda Kenya Rayla Odinga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaa weerarka iyo dagaalka ka dhan ah ururka Al-shabaab isagoo sheegay in ay khatar ku yihiin Geeska Afrika gaar ahaa dalka Kenya.
Dhinac kale Saraakiil u hadlay Ciidanka cirka ee dalka Kenya ayaa sheegay in weerarkii ay qaadeen ciidanka cirka ee dalka Kenya ay khasaaro gaarsiiyeen ciidanka Al-shabaab ayna burburiyeen saldhigyo ku yaal Gobollada Jubooyinka gaar ahaan Kismaayo.
Dowllada Kenya ayaa si cad u sheegtay in ay weerar iyo dagaal ku qabsanayso gobollada Jubooyinka iyo weliba Gedo iyagoo ku doodaya in ay weerarayaan ciidanka Al-shabaab oo gacanta ku haya Gobolladaas. Masuuliyiinta DFKM ayaan ilaa hadda si cad uga hadal duuleenka dowllada Kenya iyagoo dhowr jeer oo hore ay beeniyeen in dowllada dalka Kenya ay ku soo duushay Soomaaliya.
One comment on “Ra.iisul wasaaraha Kenya Rayla Odinga Ciidankeena ayaa weeraray Kismaayo”
madowe on October 27, 2011 at 12:32 am said:
Ogsoonow wax aad sheegaysid taariikhda ayey kuu galaysaa waan mid ku sugayso, ee daandaansiga iyo awooda aad sheegaysid, kuwo kaa awood badan baa adiga kaa horreeyey, laakiin waxaad tahay jiir aan ilko lahayn, ee ku xisaabtan in aad dhul burburisid aad meel iska fadhiisan doonto
Leave a Reply to madowe Cancel reply